China 5 in 1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
Fampidirana ny Departemanta kalitao
Fomba fitantanana kalitao
Fitsapana azo itokisana
ODM / OEM serivisy namboarina
4 amin'ny 1 karazana c hub usb c 3.0 hub docking station USB-c hub
5 amin'ny 1 karazana c hub usb c3.0 hub docking station USB-c hub
HDMI to VGA converter ho an'ny 1080p
30w fast charge portable Power Adapter ho an'ny iphone
mini DP ho VGA mpanova
Mini DP ho HDMI mpanova
DP converter DP to DVI converter dia manohana 1080p
10 in 1 Type-C HUB, USB3.0, Type-C PD 100w, VGA(1080P), Audio 3.5mm ho an'ny macbook
5 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w
PD100w dia mamaly rehefa miasa tsy misy herinaratra.5Gbps fandefasana angon-drakitra haingam-pandeha;Fifandraisana avo lenta 4K amin'ny fitaovana fampisehoana isan-karazany;aluminium firaka akorandriaka, wear-mahatohitra;OTG fanitarana asa, manitatra ny vaovao mety ho an'ny finday;totozy ivelany, fitendry, karatra tambajotra hilalao lalao.
Fitaovana: Aluminum firaka
Fifandraisana: 4K/HDMI, USB 3.0*3, Type-C/F PD 65w Output, Type-C PD65w miditra
Loko: volafotsy, mena, volondavenona espace, manga maizina, volamena raozy
fahan'ny Type-C/Vehivavy, Type-C PD100w
Fivoahana USB3.0*3,HDMI 4K@30Hz
Haben'ny vokatra 65*45*11mm
lanjan'ny vokatra 100g
Material Aluminum firaka
interface tsara 4K/HDMI, USB 3.0*3, Type-C/F, Type-C PD100w miditra
loko volafotsy, mena, volondavenona habakabaka, manga maizina, volamena raozy
Fonosana boaty fonosana baoritra mahafinaritra
• 5-in-1 USB- C hub & Massive Expansion : Ity multiport type c adapter ity miaraka amin'ny 1*30HZ HDMI video output port izay mamindra ny haino aman-jery ao anatin'ny segondra misy fiantraikany 3D, 1*100W USB- C fanaterana herinaratra, 3*USB 3.0 seranana ho an'ny famindrana angon-drakitra ambony.Chosure USB C hub no safidy tsara indrindra amin'ny fifandraisan-davitra hanitarana ny efijery Macbook-nao.
• Fanaraha-maso ny mari-pana ambany sy Chip tsy miankina: vita amin'ny fitaovana firaka aluminium mateza ary chip marani-tsaina natsangana miaraka amin'ny fiasan'ny fanaparitahana hafanana tsara indrindra;ny mari-pana ambony indrindra amin'ity toby fiantsonan'ny USB C ity dia 118.4℉ eo ambanin'ny fiasa feno entana;Ny chip iray tsy miankina dia manara-maso ny seranana iray, manohana ny fiasan'ny seranana rehetra tsy misy hatak'andro sy fitsabahana ary misoroka ny onjam-peo, overvoltage, circuit fohy ary hafanana avo ho an'ny fiarovana.
• Thunderbolt 3 mankany HDMI Dongle: Advanced 30Hz HDMI Teknolojia, fitaratra na manitatra ny efijery amin'ny alàlan'ny seranan-tsarimihetsika 30HZ HDMI mba handefasana mivantana ny horonan-tsary 3840 x 2160 amin'ny HDTV, monitor na projector.Afaka mankafy malefaka kokoa, loko, feo ary antsipiriany kokoa noho ny seranan-tsambo 30HZ ianao.Ary manohana ambany noho ny 4K * 2K @ 60HZ fanapahan-kevitra.
• Fifindran'ny angona mahery vaika: Ny interface USB 3.0 telo dia fehezin'ny chips efa mandroso, ity karazana-c splitter ity dia afaka mampiditra kapila mafy telo miaraka amin'ny fifindran'ny angon-drakitra maharitra sy haingana tsy misy fanapahana.Hafainganam-pandeha hatramin'ny 5Gbps, mifanaraka amin'ny USB 3.0 2.0 toy ny USB deive, flash drive, adapter wi-fi, totozy, fitendry ary fitaovana hafa haingam-pandeha.
• Portable & Garantie: Plug and play, 2.33oz ihany, mirindra tsara miaraka amin'ny haben'ny paosy mora apetraka ao amin'ny tanany, kitapo na paosy.Ny orinasanay dia manome antoka fiverenana tsy misy fepetra 30 andro & fiantohana 18 volana & fanohanana vokatra mandritra ny androm-piainana & Serivisy mpanjifa namana.Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra.
Fanontaniana:Inona ny mari-pana amin'ny hub rehefa mandeha ny seranana rehetra?Mahamay ve?
Valiny:Tokony ho 100℉ aorian'ny ora 4 miasa, somary mafana nefa azo ekena.
Fanontaniana:azoko ampiasaina ve ny port usb3.0 hanefa ny samsung s8?
Valiny:eny, fa ambany ny hafainganam-pandehan'ny fiampangana.
Fanontaniana:Tsara ve ny bandwidth ampiasaina amin'ny oculus rift, izay mila 3 usb 3s sy hdmi?
Valiny:Miala tsiny fa tsy ampiasaina amin'ny oculus rift ny hub.
Fanontaniana: Mifanohitra amin'ny filazalazana ny tranokala, nanoratra ny mpandinika iray fa tsy mahazaka 4k 60hz ity hub ity.misy afaka manamarina ve?
Valiny:Arakaraka.Tsy maintsy manamarina ny mombamomba ny solosainao ianao.Ny mac dia nampiseho 60Hz, fa ny solosaina finday dell dia nampiseho 30Hz, noho izany dia tsy maintsy manohana ny fampisehoana usbc 60Hz ny solosaina,Avy amin'ny mdai tamin'ny 14 Janoary 2021.
Fanontaniana:afaka mampiasa port pd ve aho handefasana adate, sa charging fotsiny?
Valiny:Ny port pd dia ampiasaina amin'ny fiampangana fotsiny.
Fanontaniana:Nisy nampiditra kapila mafy roa ve?haingana ve?
Fanontaniana:Miasa amin'ny telefaona ve ity hub ity?
Valiny:Eny, raha karazana port c ny findainao.
Fanontaniana:Mandeha ve izany raha tsy misy famatsiana herinaratra ivelany?
Valiny:Eny tsy mila famatsiana herinaratra ivelany izany.
Fanontaniana:Hiara-miasa amin'ny samsung s9 ve izy io raha manafatra sary?
Valiny:Eny, tohanana ny famaha ambany 4K.
Fanontaniana:azo ampiasaina amin'ny port thunderbolt 2 ve io?
Valiny:Tsia, Hafa ny seranana.
teo aloha: Ny fanitarana famantarana HDMI 7.5m dia manohana ny vahaolana 4K&2K
Manaraka: 17 amin'ny 1 karazana c hub usb c 3.0 station usb-c hub docking station
Tobim-piantsonana Usb Hub
Usb Hub ho an'ny Macbook
Mpanamboatra Usb Hub
Telefaonina: (86) 755-8657 2900